म्याद गुज्रेका वस्तु बजार पठाउनेहरु सुटुक्क रिहा, महानिर्देशक भन्छन्- धुरुधुरु रोएपछि छाड्यौं – Sanchar Patrika
October 4, 2020 106
१८ असोज, काठमाडौं । म्याद नाघेका पौष्टिक पदार्थ र चकलेटजन्य खाद्य वस्तुमा नयाँ उपभोग्य मिति राखेको कसुरमा पक्राउ परेका ७ जनालाई वाणिज्य विभागले सामान्य तारेखमा छोडेको छ ।
बिहीबार कलंकी र बाफलबाट प’क्राउ परेका रि–लेबलिङमा संलग्न वितरक कम्पनीकी सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाससहित ७ जनालाई विभागले उधारो धरौटीमा शुक्रबार सुटुक्क हिरासत मुक्त गरेको हो ।
आइतबार १ करोड धरौटी बुुझाउने सर्तमा मुख्य आरोपी पुष्पादेवीसहित ७ जनालाई सामान्य तारेखमा छोडिएको स्रोतले बतायो । प’क्राउ परेका ८ जनामध्ये भारतीय नागरिक रोनक बोथ्रा भने प्रहरी हिरासतमै छन् ।
ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, बर्नभिटा, प्रिङ्गल्स र युनिलिभरका अधिकांश उत्पादनमा नयाँ लेभल लगाएको भेटिएको थियो । गुज्रिसकेको उपभोग्य मिति मेटेर नयाँ मिति राखिरहेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले रंगेहात प’क्राउ गरेर बिहीबार वाणिज्य विभागको जिम्मा लगाएको थियो । जसमध्ये भारतीय नागरिक बोथ्राबाहेक अरु सबैजना शुक्रबार नै हिरासत मुक्त भएका हुन् ।
भारत राजस्थान विकानेर श्रीडुङगरगढ ग्राम वडा नं. १३ घर भई हाल काठमाडौंको बाफल बस्ने मागोलाल बोथ्राको छोरा ३५ वर्षीय रोनक बोथ्रा भने हिरासतमै छन् ।
Prevभूसको आगो जस्तै फैलिँदो नेटवर्किङ धन्दा
Nextयो दिशामा सिरानी बनाउँदा कहिल्यै हुँदैन धनको कमी
गतवर्ष १० लाखले दर्शन गरेको पशुपतिमा पहिलो पटक यो तीजमा देखियो सुनसान (फोटोफिचर)
विश्व रेकर्ड बनाएका विजयलाई ‘झुटो’ भन्नेले यो भिडियो हेर्नु, हजारौको भिडमा देखाइदिए प्रमाण
जसले हज्जारौ संक्रमित बचाए, मृ’त सयौँको संस्कार गरे, आफ्नो मृ’त्युपछि लाश उठाउने कोही भएन !
ट्राफिक जवानलाई निर्घात कु;टपि;ट गर्ने ७ जना छुटे